တစ်ဦးတမာကူကိုစုဝေးကူညီပါ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Помогите собрать ဟွတ်
စုဆောင်းဖို့ကိုဘယ်လို ဟွတ်, держи инструкции 😉
သို့မဟုတ် esch: အထွေထွေဖော်ပြချက်။
အထူး filtration နှင့်ရေ-အအေးမီးခိုးနှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆေးလိပ်အဘို့အမာကူ။ အခါရေတွင်ပျော်ဝင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောအညစ်အကြေးများ၏တမာကူဆေးလိပ်သောက်အထက်တစျပိုငျးကိုနှင့်ရေပိုက်၏အတွင်းမျက်နှာပြင်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ် condenses ။ အအေးနှင့်အ humidified သောရေဖြတ်သန်းဆေးလိပ်သောက်။
အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၏ဆက်သွယ်မှုပြီးနောက်သတ္တုတွင်း (အထက်ပိုင်း) ၏ထွက်ပြူးပြွန်များအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်သို့မှသာအဆိုပါဘူး, (အစားရေပိုအရသာနှင့်အရသာဆေးလိပ်ပေးသောစပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်ဘရန်ဒီလောင်းနှင့်လည်းအရက်အချို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်) ရေနှင့်ပြည့်စုံလေ၏ 2-5 စင်တီမီတာ။ ထိုအခါရိုးတံ (အထက်ပိုင်း) ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။
နှစ်ခုအဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်လိုအပ်သောလျှင်တံဆိပ်ခတ်ရော်ဘာလက်စွပ်ဖြည့်စွက်သည်အာဘော် (ရေပိုက်) သို့ထည့်သွင်းထားသည်။ တံဆိပ်ခတ်ချွတ်၏မရှိခြင်းအတွက်တစ်သျှူးစက္ကူသို့မဟုတ်လွင်ပြင်စက္ကူသုံးနိုငျ, အအာဘော်များ၏မျိုးတွင်န်းကျင်ထုပ်ဟာရိုးတံဖို့ကွန်နက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
extension ကိုတမာကူ kladtsya သတ္တုပန်းကန်ပြားပျံရဲ့ထိပ်မှာ။ နောက်ထပ် (လည်းတံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်နှင့်အတူ) ဆေးရွက်ကြီးများအတွက်ခွက်ကိုဝတ်ဆင်။
После установки чашки в не с помощью щипчиков кладтся небольшое количество табака — примерно одна чайная ложка. Уровень табака должен быть не выше края чашки. Табак кладут не плотно.
သင်ပန်းကန်ထဲမှာဆေးရွက်ကြီးထားခင်မှာအနည်းငယ် rasterebit မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ဖလားထိပ်သေးငယ်တဲ့အပေါက်တစ်ခုလုံးဧရိယာကျောက်မီးသွေးကနေပူပြင်းတဲ့လေထုထောက်ပံ့ရေးမထားတဲ့အတွက်, သတ္တုပါးနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။ ယင်းသတ္တုပါးမှေးညှပျပူမီးသွေး, သဘာဝသို့မဟုတ် tablet Compact ကျောက်မီးသွေးအပေါ်ထားရှိ bystrovozgorayuschayasya
При использовании быстровозгорающегося угля (таблетки прессованного угля, покрытые составом для розжига "с одной спички) в таблетках необходимо поджечь таблетку и дождаться когда она обгорит со всех сторон. Будьте бдительны! Таблетка после обгорания очень горячая, но при этом может быть чрного цвета и выглядеть холодной. При обгорании выделяется достаточно едкий дым. Ни в коем случае не пытайтесь в это время затягиваться из мундштука!! !При обгорании могут отскакивать искры. После полного обгорания угля и прекращения выделения резкого дыма, обождите 10-15 секунд прежде чем сделать первую затяжку.
သဘာဝကကျောက်မီးသွေး (ဗဓေလသစ်ဖယ်ရှားရာမှတမာကူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကျောက်မီးသွေးအထူး) သုံးပြီးသောအခါ, အနည်းဆုံးဘက်ပေါ်တွင်နီခြင်းတိုင်အောင်, မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အ ognm အထက်အပူ, ပြီးတော့ချမီးခိုးတစ်ဦးမာကူဖို့သွားရဦးမည်။ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့မီးဖိုပေါ်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရွက်ကြီး၏ပျော့အရသာပေါ်လာ nachnt 5-10 ပြင်းထန်သော Puff ပြီးနောက်။ တမာကူကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အဆင်သင့်ပါ!
Posted in, စားသောက်ဆိုင်များ, Café, ဘား
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,244 စက္ကန့်ကျော် Generate ။